यस्तो छ बुधबारको विदेशी मुद्राको विनिमयदर (तालिका सहित) —
यस्तो छ बुधबारको विदेशी मुद्राको विनिमयदर (तालिका सहित)
२९ पुष २०७७, बुधबार ०४:३९ admin	0 Comments
काठमाडौं – बुधबार अमेरिकी डलरसहित अन्य केही देशको विनिमयदर घटेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १६ रुपैयाँ ९२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १७ रुपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ८२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ९६ पैसा तोकिएको छ ।
एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ ११ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ २७ पैसा तोकिएको छ । बाँकी तालिकामा हेर्नुहोस्ः
← नेपाली राष्ट्रियतालाई निरन्तर प्रहार, जी न्यूज भन्छ- सगरमाथामा भारतले दाबी गर्नुपर्छ !
भगवान् रामले बध गरेका रावणको श’वलाई के गरियो ? यस्तो छ तथ्य ! →
आज पनि घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कती? हेर्नुहोस्
१५ मंसिर २०७७, सोमबार ०७:०१ admin	0
आज विदेशी मुद्रा साट्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् आजको विनियमदर
२१ पुष २०७७, मंगलवार ०४:०३ admin	0